FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA AKKAMIIN BEEKNA? FURMAANNI ISAA MAALI? SHARE WALIIF GODHAA (Fawaz Ahmad Oromiya) irraa… – Beekan Guluma Erena
FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA AKKAMIIN BEEKNA? FURMAANNI ISAA MAALI? SHARE WALIIF GODHAA (Fawaz Ahmad Oromiya) irraa…	Beekan Erena
Politics Category October 30, 2016OROMO REVOILUTION
FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA AKKAMIIN BEEKNA? FURMAANNI ISAA MAALI? SHARE WALIIF GODHAA (Fawaz Ahmad Oromiya) irraa… Yeroo hedduu hiriyyoonni kiyya kan fb karaa keessaatiin dhufuun gaafii kana na gaafachaa turtan, gaaffiin kuni ilmaan Oromoo hedduu biratti gaafii tahee hafe. Kanaafin gabaabsee kana isiniif qooheessuuf dirqame. FACEBOOK KEENYA HATAMUU ISAA MAALIN BEEKNA? fb keenya hatamuu isaa kan ittiin beeknu keessaa 1, SETTING keenya jala galuun iddoo SECURITY jedhu cuqaasuun(tuquun) ACTIVE SESSION kan jedhu jalatti iddoo WHERE YOU’RE LOGGED IN jedhu irratti lakkoofsa isiniif fidu ilaaluun hubachuu dandeessu, fkn lakkoofsi san yoo 30 tahe iddoo 30 irraa seenuu keessan ibsa, kanaaf iddoo “WHERE YOU’RE LOGGED IN” jedhu tuquun iddoo fi yeroo akkasuma gosa bilbila ykn koopitaraa kan Akkaawuntii(Account) fb keenyaan seename nuuf fida waan taheef san ilaaluun hatamuu isaa hubachuu dandeenya.
2, Yoo wanti nuti post hin godhin maqaa keenyaan Post tahe. 3, Message nuti hin barreessin yoo argine.
4, Link nuti quba hin qabne like tahee yoo argame fi kkf dha. FURMAANNI ISAA MAALI??? Hatattamaan SETTING keenya jala seenuun(galuun) iddoo SECURITY jedhu cuqaasuun(tuquun) “ACTIVE SESSION” kan jedhu jalatti iddoo WHERE YOU’RE LOGGED IN jettu tuquun wantoota armaan gadii kana hubachuu dandeenya.
1, yeroo fb keenya bilbila ykn koompitara biraatin seename fi 2, iddoo(bakkaa) irraa seenamee jiru akkasuma 3, gosa bilbilaa ykn koomlitaraa(computer) akkaawuntii(Account) keenyaan fayyadamamaa jiruu hubachuu dandeenya. kunis erga WHARE YOU’RE LOGGED IN jedhu jala seenne. TIME: kan jedhu yeroo ibsa LOCATION: kan jedhu iddoo yoo ta’u DEVICE TYPE: jechuun ammoo, gosa bililaa ykn koompitara akkaawuntiin keenya itti seenamee ibsa. -Kanaaf SETTING>>>SECURITY>>>WHERE YOU’RE LOGGED IN, kan jedhu tuquun akkuma dura isiniif ibsetti, iddoo fi yeroo fb keessan itti seename ilaaluun mallattoo (X) kan duratti argamu sana, tuquun yeruma sanitti iddoo irraa fayyadamamaa jiru san irraa cufuu dandeenya. -Akkasuma yeroo SETTING jala galuun SECURITY tuqxan, LOGIN APPROVALS ON jedhu ON godhuun yeroo akkaawuntiin keessan iddoo biraa irraa seename NOTIFICATION akka isiniif fiduu godhuu dandeessu. Kanaaf LOGIN ALERT kan jedhu ON godhaa. Kana mees furmaanni biraa ni jira yeroo biraa ballinaan walitti deebina. –
Ani kan isiniif qioheesse Obboleessa keessan #Fawaz_Ahmed_Oromiya ti Horaa bulaa #Share godhuun waliif dabarsaa, Gadaan gadaa bilisummaati. #Injifannoo_Ummata_Oromoof
← Conflicts in Oromo activists, past behavior is best predictor of future behavior. By GiDira Vs EbiSa
WALIIGALTEE ODF, PG7, APP fi SDNM)-IBSA GABAABAA Hundee Dhugaasaa’tiin →